» “चुनाव हारेको माधव नेपाल,लाई दोस्रो पोजिसनमा राख्दा कसरी हेपियो ? : केपी ओली (भिडियो सहित) “चुनाव हारेको माधव नेपाल,लाई दोस्रो पोजिसनमा राख्दा कसरी हेपियो ? : केपी ओली (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
“चुनाव हारेको माधव नेपाल,लाई दोस्रो पोजिसनमा राख्दा कसरी हेपियो ? : केपी ओली (भिडियो सहित)
हाम्रोखबर संवाददाता 342 Views
“काठमाडौं, ११ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले विभाजन नभई चोईटिएको टिप्पणी गरेका छन् । आज राति ८ बजे प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।”
“उनले आफूलाई तानाशाही भन्नु गलत भएको पनि बताए । उनले कुनै समस्या परे जनताको बीचमा जाने कुरा गर्दा कसरी निरंकुशता भयो ? भनेर प्रश्न गरे । उनले माधव नेपाललाई चुनाव हार्दा पनि आफूले पार्टीको दोस्रो पोजिसनमा राखेको सुनाउँदै कसरी हेपिएको भन्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।”
“उनले माधव नेपालले प्रतिपक्षी दललाई किन सरकारको नेतृत्व सुम्पिए त ? भनेर प्रश्न गरे । एमालेको एकल सरकार हुँदाहुँदै किन यो सरकार ढालेर गठबन्धनको सरकार बनाएको भनेर माधव नेपाललाई ओलीको प्रश्न थियो ।”
“उनले आफ्नो कारणले एमाले नफुटेको पनि दाबी गरे । उनले संसद् विघटन नगरेको भएपनि एमाले फुटिसकेको थियो भन्ने स्मरण गराए । उनले २०७५ जेठ २ गतेमा कसरी फर्काउन सकिन्छ ? भन्दै समय कसैले पनि फर्काउन नसक्ने टिप्पणी गरे ।